Izibani zelanga zinikeza abesifazane baseKenya indlela yokuphuma ekuhwebeni ngocansi | Scrolla Izindaba
Izibani zelanga zinikeza abesifazane baseKenya indlela yokuphuma ekuhwebeni ngocansi
Izibani ezisebenza ngelanga ogwini i-Lake Victoria e-Kenya zisiza abesifazane ukuthi bagweme ukuphoqelelwa ukudayisa ngomzimba ukuze bathole izinhlanzi.
Bangaphezu kwama-400 abesifazane besentshonalanga ye-Kenya abahlinzekwe ngamalambu asebenza ngelanga ukuze abasize bahehe izinhlanzi.
Lokhu kusho ukuthi bangagwema izimvumelwano “zokwenza ucansi-ukuthola inhlanzi” okuyinto evame ukwenzeka kakhulu embonini yokudoba esifundeni.
Abakwa-Reuters babike ngoLwesibili ukuthi kule minyaka emibili edlule, uMary Achieng ’ukwazile ukukhipha isikebhe sakhe asiyise echibini ubusuku obubodwa ngeviki. Lapho, afike ehlisele khona isibani sakhe esisebenza ngelanga emanzini, bese sidonsa izinhlanzi eziningi.
Ukubamba izinhlanzi ezingamakhilogremu angama-500 kubiza ama-shillings ayi-50 000 ase-Kenya (izi-R6,800), futhi anele ukondla wonke umndeni wakhe isonto lonke. Kodwa-ke, impilo ibingahlali inje.
Ngaphambi kokuba anikezwe isibani eminyakeni emibili eyedlule, kwakufanele agcwalise isitolo sakhe ngezinhlanzi azithenge kubadobi bendawo, iningi labo ebelifuna ukubuyiselwa ngocansi. UMary, oshintshwe igama ukuze avikelwe, wayengenayo enye indlela ngaphandle kokuvuma ukuya ocansini.
“Abadobi ibona abashoyo ukuthi makudayiselwe bani izinhlanzi. Uma ungabathokozisanga, awubi nalutho ongaludayisa ngalolo suku,” etshela i-Reuters Foundation.
Kodwa-ke, kule minyaka emibili edlule, iphrojekthi eyethulwe ngaphansi kwe-Africa for SDGs (Sustainable Development Goals) inikeze abesifazane basekhaya amalambu asebenza ngelanga, ibanika amandla okudoba ngokuzimela.
“Manje sengiyayazi injabulo yokuthola amandla njengomuntu wesifazane kanye nenkululeko yezomnotho eza nayo,” kusho uMary.
UMary utshele abakwa-Reuters ukuthi uyalisebenzisa futhi ilambu ukukhanyisa isitolo sakhe, asigcine sivulekile isikhathi eside kunangaphambilini. Uphinde wathi izingane zakhe zilisebenzisa njengesibani uma zifunda.
Ukwehliswa kokuhwebelana “ngokwenza ucansi- ukuthola inhlanzi” kunciphise nezinga leSandulela Ngculazi kule ndawo, futhi amalambu anciphise isidingo samalambu kaphalafini, okungukungcola okuyingozi.
Umthombo wesithombe: @Flickr